Score Corporate Score - Ukulinganiswa Kwezikweletu sebhizinisi nezincazelo
Lapho umnikazi webhizinisi eqonda ukuthi kubaluleke kangakanani ukusungula nokugcina Iphrofayili Yezikweletu Zobumbano, lapho-ke kubalulekile ukuqonda ukuthi ukusebenza kwaleli phrofayela kukalwe futhi kwafakwa kanjani yizikhungo ezihlukile zokubika. Lokhu kubalulekile ukuze umnikazi webhizinisi athole izindlela zokwenza ngcono iphrofayili yenhlangano yakhe futhi ngaleyo ndlela udumo lwayo nempumelelo. Yize iningi lalezi zinhlangano kanye nezinhlangano zilandela imibiko efanayo futhi ziqoqa imihlahlandlela, zonke zinendlela eyingqayizivele, yokuphathelene edinga ukucatshangelwa.
I-Dun & Bradstreet (D & B ™)
I-D & B ™ ine-database enkulu yamaphrofayili wesikweletu ezigidini zezinkampani- mhlawumbe iyinhlangano ebhekiselwa kakhulu enhlanganweni uma kufikwa ekufuneni izilinganiso zezikweletu zebhizinisi. I-D&B isebenzisa indlela eqondile yokulinganisa la mabhizinisi afaka uhlelo lokumaka lwamakhompiyutha wokuphathelene nokubaluleka kokuthenga ngesikweletu, kanye nohulumeni, kanye nohlelo lukahulumeni lwamazwe lonke olubizwa nge- “DUNS” (Idatha Universal Inombolo Yesistimu) okuluhlelo ihluke kakhulu, futhi isebenza kahle, indlela yokuhlukanisa inkampani. Uhlelo lwe-Paydex luhlanganisa umlando wokukhokha, kanye namakhono akhokhwayo wokukhokha kabusha manje manje ukuze anikeze amaphuzu ayisisekelo wokubala. Ngaphezu kwesikolo se-Paydex, i-D&B futhi isebenzisa uhlelo olulula kakhulu lwe-1 ku-4 uhlelo lokulinganisa isikweletu. Uhlu olungezansi yisilinganiso sePaydex:
70 Yehlisa i-15
50 Yehlisa i-30
40 Yehlisa i-60
30 Yehlisa i-90
20 Yehlisa i-120
Ama-Standard & Poor's, abizwa nangokuthi "S&P" izinkampani ezikala esikalini kusuka ku-AAA kuya ku-D, nge "NR" yezinkampani ezintsha kakhulu noma ezingakanelwanga. Kukhona izilinganiso phakathi kwebanga ngalinye lezinhlamvu elisho isikhundla phakathi kwalelo banga. Ngaphezu kwalokho, izikhathi eziningi i-S&P izophinda inikeze umbono noma isitatimende esinolwazi esaziwa yibo ngokuthi "iwashi lesikweletu" esisho ukuthi ngabe kukhona ushintsho oluzayo esilinganisweni. Iwashi lesikweletu lingasho ukukhushulwa okungenzeka, ukwehlisa noma ukubikezela ukungaqiniseki okuthile. Isilinganiso sazo simi ngale ndlela elandelayo:
AAA Isilinganiso esihle kakhulu - lokhu kusho izinkampani ezizinzile kakhulu, ezinokwethenjelwa.
AA Isilinganiso esihle kakhulu - lokhu kusho izinkampani ezithembekile ezinobungozi obuncane ukwedlula i-AAA
A Isilinganiso esihle - ukuma kwezimali kungathinteka ezomnotho noma emakethe.
BBB Isilinganiso esanelisayo. - Ukuma ngokwezezimali kungathinteka emnothweni noma emakethe
BB Isilinganiso esingaphansi kwesilinganiso esenelisayo - ukuthambekela kokuma ngokwezezimali okuthinteka emnothweni
B Kuncane Kancane kunokugculiseka - ukuma kwezezimali kungazinzanga
CCC Isengozini yemvelo yezimali - ayizimisele
CC Iba semngceleni omkhulu ngokwezezimali - kuncike kakhulu esimweni esihle somnotho - Ukuqagela okulindelekile
C Ukuqagela Kakhulu - Kungaba sesimweni sokukhokha ngemuva kwesikweletu esithile, noma ngisho nokuqothuka
CI Ngemuva kwezinkokhelo zenzalo
R Ekuqothulweni nasezandleni ze-Regulatory ejensi ngenxa yokuma kwezezimali
SD Kukhethwe Ngokuzenzakalelayo kwimalimboleko ethile noma isikweletu
D Kufakwe ku-othomathikhi kwizibopho eziningi futhi i-S&P ibeka le phrofayili izosetshenziselwa iningi noma zonke izibopho
I-Equifax ihlinzeka ngeBanga Lobungozi Bokukweletwa Kwebhizinisi Elincane elihlose ukubikezela ubuqili kuma-akhawunti wezezimali, futhi lenzelwe imboni yezinsizakalo zezezimali. Le nombolo inezinombolo, phakathi kwe-101 ne-992, enamaki aphansi abonisa ubungozi obukhulu bokukhohlisa. Kanye nekhodi yezinombolo, i-Equifax idedela “amakhodi wezizathu” amane akhombisa ukukhombisa ukuthi yiziphi izici ezithinte kakhulu isikolo. I-Equifax futhi isebenzisa uhlelo oluhlukile lwe- “Commerce Score” oluhlukanisa “ukuhweba” kwesinye isikweletu (ukuqashisa, njll.), Ngokususelwa kusisekelo sokuthi abanikazi bebhizinisi kungenzeka bahlangane nezakhiwo, ukuqashisa, noma imigqa yasebhange yezibopho zesikweletu ngaphezulu izibopho ezihlobene nokuhweba. Lezi izikolo zizama ukubikezela uhlobo lwama-akhawuntri okungenzeka ukuthi afakwa kuwo ngokuzenzakalelayo.
Isikolo Solwazi Lwezikweletu
0-9 Ubungozi Obuphansi Kakhulu
10-20 Ingozi Yesilinganiso
21-30 Ngaphezulu Kwengozi Yesilinganiso
31-40 Risk High
41-69 Ingozi Ephakeme Kakhulu
70 Imininingwane iye yabikwa ku-Equifax eqhamuka Ehhovisi Lenkantolo Yase Bankruptcy
Score Information Score kuboniswa Kusetshenziswa Ishadi Landelayo:
Iminyaka isebenza e-Equifax database 0-1 1.1-2 2.1-4 4.1-9 9.1 +
Umphumela 10 8 6 4 0
Inkomba Yamanje Yokukhokha 51 + 41-51 31-40 21-30 0-20
Umphumela 10 7 5 4 0
Inani lezinkomba zokukhokha ezinsukwini zokugcina ze-90 0-1 2-3 4-6 7-10 11 +
Umphumela 10 8 5 3 0
Index Yenkokhelo yokugcina yekota edlule ikota efanayo ngonyaka odlule (umehluko ngamaphuzu) 41 + 21 + 40 11 + 20 6-10 0-5
Inani lezinto ezidelelayo eminyakeni eyi-2 edlule 10 + 8-9 5-7 2-4 0-1
Yayisanda kangakanani into edangalisa ukwedelela (ezinyangeni) 1-2 3-4 5-6 7-12 12 +
Inani lezinto ezidelelayo njenge-% yamadola akweletwa abahlinzeki 100% 51-99% 11-50% 1-10% 0%
Umphumela 10 8 5 2 0
0 65 Bonke abathengisi bezentengiselwano babika ukukhokha kungakapheli imigomo
1-10 8 Izikhathi ezimaphakathi zokukhokha zingaphezu kwemigomo
11-20 6 Isilinganiso sezinsuku okufanele zikhokhwe yi-10 kuya ezinsukwini ezingama-20 ezingaphezu kwemigomo
21-30 5 Isilinganiso sezinsuku okufanele zikhokhwe yi-20 kuya ezinsukwini ezingama-30 ezingaphezu kwemigomo
31-40 6 Isilinganiso sezinsuku okufanele zikhokhwe yi-30 kuya ezinsukwini ezingama-40 ezingaphezu kwemigomo
41-90 5 I-5% yebhizinisi kuphela e-Equifax ewela kuleli banga
91-100 3 Bonke abathengisi bezentengiselwano babika kakhulu ngokudlule noma okuzenzakalelayo
NA NA Akunabaphakeli bezentengiselwano ababikiwe ku-Equifax
I-ClientChecker iyazibiza ngokuthi “i-freelancer's credit Bureau,” futhi incike emibikweni yabasebenzisi be-software yayo ye-invovois ukuze inikeze isilinganiso sebhizinisi ebhizinisini noma enhlanganweni. Le nombolo ichaza ukuthi inkampani le ikalwe ngokwezimali, futhi yaziwa ngokuthi uphawu lwePayQuo. Le nombolo ihambisana ne- “Aggregate Business Credit Report” efaka inani lokungakhokhi okubikiwe kanye nenani eliphakathi lokukhokha sekwedlule ezinsukwini.
I-PayQuo Score ikhishwa ngokuya ngethebula elilandelayo:
90 Kukhokhelwe Kwangoko noma Ngokwemigomo
80 Ukukhokhelwa kwe-10 noma imigomo yangaphambilini yezinsuku ezimbalwa
70 Izinsuku ezikhokhelwayo ze-20 noma imigomo embalwa edlule
60 Izinsuku ezikhokhelwayo ze-30 noma imigomo embalwa edlule
50 Izinsuku ezikhokhelwayo ze-60 noma imigomo embalwa edlule
40 Izinsuku ezikhokhelwayo ze-90 noma imigomo embalwa edlule
30 Izinsuku ezikhokhelwayo ze-120 noma imigomo embalwa edlule
20 Ukukhokhelwa kwe-120 noma imigomo edlule eyedlule, noma bekubhaliwe
Ishadi lisetshenziselwa ukuthatha isilinganiso ukuze kuhlolwe amaphuzu.
I-Studan ingenye ye-mega-3 bureaus yesikweletu (kanye ne-Equifax neTransunion), futhi futhi isebenzisa izilinganiso ezithile zeProfayili Yezikweletu Ezihlinzekiwe ukuze inikeze izikolo ezikweletini namabhizinisi izinkampani izilinganiso zokufaneleka. Isipiliyoni sithembela kuzinhlelo ezimbalwa. Olunye uhlelo lwe-Intelliscore oluklanyelwe ukubikezela ukuqeda okukhokhayo ngaphezulu kwezinsuku ze-90. Isetshenziselwa amabhizinisi wanoma yiluphi usayizi, i-IntelliscoreSMIsistimu inika umaki wobungozi osuka ku-0 uye ku-100, nezikolo eziphakeme kakhulu ezibonisa ubungozi obuncane.
Enye indlela esetshenziswa yi-Experian uhlelo lwe-Vantage Score. Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukukala inkambu yokudlala, uma kungathiwa, ukuze umehluko ezilinganisweni zezilinganiso phakathi kwama-ejenti wokulinganisa ahlukile uwumphumela wamapharamitha ahlukile, hhayi nje izikolo ezihlukile zezinkinga ezikweletwayo ezifanayo. Lezi zikolo ziqondaniswe ngokungaguquki kuyo yonke inkampani ebika isikweletu ukwenza amabanga ukusuka ku-501-990 elihambelana nohlobo lwesikole lwesikole olulula (futhi cishe oluzwisiswa yizwe lonke) A, B, C, D, noF.
Amabanga ahla kanjena:
Kukhona, ezinye izinhlangano eziningi zokubika izikweletu nezinhlangano eziningi, yize sifingqe izinhlangano ezaziwa kakhulu.
Le nhlangano iyingxenye encane ye-InfoUSA ™, futhi ilungiselelwe ukuhlinzeka ngombiko wesikweletu olula, ongabizi, kodwa ofundisayo. Ikhipha umbiko oqukethe izinto ezinjengamagama wezikhulu noma abaphathi benkampani, imininingwane yabo yokuxhumana, izinkomba, inombolo yokuhlunga kwe-UCC, kanye nohlelo lokulinganisa olulula oluyishadi le- “A ngokusebenzisa C”, elineshadi Isilinganiso se- “U” se- “akwaziwa.” Siqoqa ulwazi oluningi kusuka kubanikazi bebhizinisi uqobo, kodwa luqinisekisa lolu lwazi ngokuzimela.
Leli yishadi lezilinganiso zeBusCCUSUSA:
I-FactualData (eyake yaziwa ngokuthi yi-FDInsight) inikezela ngendawo yokubika eyingqayizivele yababolekisi abangahle noma ababambisene nabo kwebhizinisi ngokunikela ngokukhetha okufana nemenyu yesethenjwa noma izinkundla zokucinga Besebenzisa uhlelo lwabo oluhlukile lokuqoqa idatha, bangabheka, izinkomba zebhange, isifinyezo sezezimali zebhizinisi, kanye namarekhodi omphakathi obugebengu. Inkampani yokubika yesibili ngobukhulu emkhakheni wezezindlu obambiso / wezindlu nomhlaba, basebenzisa ingalo enamandla yokucwaninga eqoqa futhi iqinisekise imininingwane enikeziwe.